Heshiiskii Garowe iyo Xasuuqa Galkacayo | KEYDMEDIA ONLINE
Heshiiskii Garowe iyo Xasuuqa Galkacayo
Dr. Ali.A.Hirabe - Faroole Dagaalka uu kula jiro shacabka reer Gaalkacyo waxaa sabbabteeda lahaa R/wasaaraha Cabdiweli iyo Shariifka oo labadaba taageero lacageed iyo mid Militari kula heshiiyay dhawaan hoyga uu ka degen yahay Faroole Gobolka Bari ee magaalada Garoowe 29 August 2011.
Xaqiiqdii qodobada lagu heshiiyay marka aad Akhriso waxaa ka mid ahaa qodobka seddexaad waxuuna ahaa:
3. Waxaa labada dhinac isla ogolaadeen in si wada jir ah looga shaqeeyo adkaynta nabad-galyada, la Dagaalanka Argagaxisada, Burcad-badeeda iyo Tahriibta.
Maalin ka dib markii R/wasaaraha Cabdiweli ka soo dhoofay Magaalada Galkacayo durbadiiba Faroole waxuu Magaalada Galkacayo u soo diray Ciidamada daraawiishta halkaas oo aay ku gumaadeen shacabkii deganaa xaafada Garsoor iyo Israac, waxaayne ku tilmaameen in dagaalka uu u dhaxeeyo argagixiso iyo burcad-badeeda oo wada socda iyo dowlada Puntland.
Akhristow sow ma cada in uu hir-galay heshiiskii Garowe lagula gaaray Faroole.
Waxaa iyana xaqiiq ah in heshiiska uu ka mid ahaa in leeysku afgartay in dhaqaalaha Caalamka ugu yaboohay dowlada Federaalka ee la dagaalanka burcad-badeeda in la siiyo Faroole si loo dhiso ciidanka bada isla markaana Maamulku u isticmaalo sidii loogu talo galay in aay wax badan ka taraysaa soo celinta nabada Somalia balse ujeedada loo adeegsaday xiligaan aay tahay mid guracan.
Heshiiska ayaa hore ugu dhacay Uganda kaas oo lagu gorfeeyay mashruuca la Dagaalanka Burcad-Badeeda Somalia akhristow Halkan ka fiiri.
Dhaqaalaha guud ee la ansixiyey ayaa gaaraya 14 milyan oo doolarka Maraykanka ah, inta badan waxa uu geli doonaa Puntland sida uu sheegay Agaasimaha Kaluumeysiga Mudane Joocaar.
Waxaa socda isir gumaad ku wajahan beelaha Puntland qaasatan kuwa aanan aheeyn Maxud Saleebaan,dib u fiiri jufa walbaa waxaa aay cadeeysay in aay ka go´day Puntland sabbabta oo ah waxaa aay cadeeyeen in aay ku hungoobeen riyadii lagu dhisay Maamulka Puntland balse Puntland aay noqotay hotel hal jufo aay leedahay.
Waxaa la dhisay Maamulo sida Raascaseer State, Karkaar State, Canshuurtii shacabka Puntland ayuu ku gumaadayaa isla shacabkii bixiyay canshuurta, Ciidamada huwanta ah ee daraawiishta iyo kuwa Ethiopia ka yimid ayaa gumaadka ku fogaaday halka kuwa xilka u haya Faroole aay ku talaxtageen been abuur iyo filinkii reer galbeedka ee ahaa argagixisada caalamka iwm ee lagu xasuuqayay shacab aanan argagixiso shuqul ku laheeyn.
Faroole waxaa loo balan qaaday qodobka:
4. Waxaa la isku raacay in Puntland laga taageero Tababarada, Gunooyinka iyo qalabaynta Ciidanka Amniga, sida Ciidanka Booliiska, Nabad-sugida, Asluubta IWM.
Sow cadaalo daro maaha in jufo ka mid ah Maamulka Puntland heshiis noocaan ah lala galo, waxaan rajeeynayaa in Shariif iyo Cabdiweli lagula xisaabtamo gumaadka Faroole ka geeystay Magaalada Galkacayo in masuuliyadeeda nafeed iyo mid hantiyeedba aay wax ku leeyihiin.
Maaha mid laga aamusi karo Xasuuqa Faroole ka wado Dhulkaas.Waxaa halis ku jira dhamaan shacuubta degen Puntland oo marba mid la gumaado iyada oo uu Filimka yahay Argagixiso ayaad tihiin iwm.
Shariif Lamood iyo Cabdiweli weli waxaa aay ku socdaan xawaare aayan Somalida ogeeyn, heshiiska Muqdisho ee looga magacdaray dib u heshiisiin waa mid cadaalada ka fog somalina aayan u sineeyn.
Faroole runtii ma matalo Puntland waayo qaarkeed ayuu gumaadayaa, Shariifna ma matalo reerkiisa iskadaaye Somali oo dhan, hadaba yaa heshiinaya????? Akhristow ka jawaab.
By Dr. Ali.A.Hirabe - Hirabe_a@hotmail.com